Shirkadda Dhaweeye oo Tartan Baabuur lagu guulaysanayo u Qabanaysa Darawallada ku Shaqeeya Adeeggooda | Somaliland Post
Home Maqaallo Shirkadda Dhaweeye oo Tartan Baabuur lagu guulaysanayo u Qabanaysa Darawallada ku Shaqeeya...
Hargeysa (SLpost)- Shirkadda DHAWEEYE ayaa shaacisay inay tartan lagu guulaysanayo baabuur Vitz ah u qabanayaan Darawallada gaadiidka dadweynaha ee ku shaqeeya adeegga Dhaweeye.
Tartankan oo ay u furan tahay inay ka qayb-qaataan dhammaan darawallada Adeegga Dhaweeye ku shaqeeya ee magaalada Hargeysa, ayaa soconaya muddo bil ah laga bilaabo 1-da bishan April illaa dhammaadka bisha, waxaana laga dhex xulan doonaa 20 Darawal ee ugu shaqada wanaagsan, kuwaas oo ku tartami doona isla markaana la dhex-dhigi doona Gaadhiga Vitz-ka ah.
Madaxa Suuq-geynta iyo Xidhiidhka Dadweynaha ee Shirkadda Dhaweeye Farax Ayaanle Dayax Weerar, ayaa shaacisay shuruudaha looga baahan tahay darawallada ku shaqeeya adeegga Dhaweeya ee ka qayb-qaadanaya tartankan.
Shuruudaha loo baahan yahay Darawllada fursadda u heli doona inay ku guulaystaan baabuurka, ayay ku sheegtay:
In Darawalku si joogto ah ugu shaqeeyo adeegga Dhaweeye laba bilaabo 1-da bisha April ilaa 30-ka bisha.
In Darawlku ka mid noqdo ama ku soo baxo qiimeyn lagu soo xulan doono 20-ka Darawal ee ugu shaqada badan ama wanaagsan muddadaas 30-ka maalmood ah.
Muuqaalka Hoose kaga Bogo Macluumaad la xidhiidha tartanka loo qabanayo Darawallada ku shaqeeya Adeegga Dhaweeye.
Shirkadda Dhaweeye oo la aasaasay sannadkii 2018-kii isla markaana xilligan ka hawl-gasha inta badan deegaanada Soomaalida balse xarunteedu tahay caasimadda Somaliland ee Hargeysa, ayaa noqotay hormuudka shirkadaha bixiya Adeegga Isku-xidhka gaadiidka dadweynaha gaar ahaan tagaasida iyo Bulshada, iyadoo qofku barnaamijka shirkadda oo Qaab Online ah ama telefoonkiisa gacanta ee Telesom ka dalbadan karo tagsi qaada ama cuntada uu u baahan yahay goobta uu joogo loogu geynayo.